Xuquuq iyo waajibaadActuellement sélectionné
Xeerka waalidku waa sharciga ugu muhiimsan marka laga hadlayo carruur iyo qoys. Waxaa isaga ku cad xuquuqda carruurta marka loo eego waalidkooda iyo waaliddiinta waajibaadkooda marka loo eego carruurta.
Xuquuqda waaliddiinta iyo carruurta ee daryeelka caafimaadka
Waa adiga, ka waalid ahaan, iyo carruurta cidda heleysa warbixin oo fursad u heleysa in ay meel iska taagto arrimaha taabanaya daryeelka carruurta. Waxay tusaale ahaan ka dhignaan kartaa in aad u baahantihiin turjumaan.
Xuquuqda waaliddiinta ee dugsiga
Dhammaan kuwa ka shaqeeya dugsiga waa in ay wada shaqeyn la yeeshaan waalidka si ay u horuumariyaan waxa uu dugsigu ka koobanyahay iyo hawshiisa.
Ugu yaraan hal mar xilli dugsiyeedki waa in macallinku uu waalidka ku casuumaa wadahadal horuumarineed oo ku aaddan ardayga xaaladdiisa dugsi ahaaneed.
Bogga Hey’adda dugsiyada ayaad wax dheeraad ah oo ku aaddan xuquuqda waaliddiinta ee dugsiga ka akhrisan kartaa.
Sida waafaqsan xeerka waaliddiinta waxay carruurtu xaq u leeyihiin xannaano, ammaan iyo tarbiyo wanaagsan. Carruurta waa in loola dhaqmaa si qof ahaan iyo nuuc ahaanba looga taxaddiry, mana loo geysan karo ciqaab jir ahaaneed ama macaamilid bahdil ah.
Waajib ahaanshada dugsiga
Ku dhawaad dhammaan carruurta deggan Swiidhan waxaa waajib ku ah dugsi. Waajib ahaanshada dugsigu waxay ka dhigantahay in ardaygu uu ka qeyb qaadanayo hawl lagu abaabulayo dugsi, haddii uusan ardaygu lahayn sabab loo qaateen ah oo ah in uu iska dhaafo. Qofka waalidka u ah canug uu dugsi ku waajibay waa in uu hubiyaa in canuggu waajibkiisa dugsi ka soo baxo.
Wax dheeraad ah oo ku aaddan dugsiga Swiidhan halkan ka akhriso.
Waajib ahaanshada nafaqeynta
Waajib ahaanshada nafaqeyntu waxay soconeysaa ilaa iyo inta canuggu 18 sano ka buuxinayo Haddii canuggu uu dugsi dhigto 18 sano jirnimadiisa ka dib waaliddiinta ayey nafaqadiisu waajib ku tahay inta uu dugsigu socdo, laakiin ugu badnaan ilaa uu canuggu 21 sano ka buuxiyo.
Xeerka qoyska iyo arrimaha waalidnimada
Sida canugga ugu fiican ayaa wax kala saareysa xagga arrimaha ku aaddan daryeelka, deegaanka iyo wada jiridda. Rabitaanka canugga ayaa mar walba la tixgelinayaa, iyadoo la eegayana da’da iyo bislaashada. Haddii ay taasi ugu habboontahay waa in hadafku uu ahaadaa in waaliddiintu yihiin xannaano wadaag.
Xannaanaynta carruurta waxay tahay xuquuqda iyo waajibaadka saaran qofka xilhayeha xannaanadda oo badanaa ah waalidka. Taasi mecnaheed waxeey tahay in xananeeynta caruurta aad ku lee dahay xuquuq iyo waajibaad ku saaran. Carruurta waxay xaq ku leeyihiin xannaanyn inta ay ka gaarayaan da’da 18 sano.
Xannaano wadaag ah
Xannaano lagu keli yahay
In waalidiinta mid ka mid ah keligiis la siiyo xilhaynta xannaanada mecnaheed waa waalidkaas kaligiis saaran tahay mas'uuliyada canuga iyo go'aamada ku saabsan canuga. Haddii labada qof ay is qabaan waxay wadajir uu leeyihiin xilhaynta xannaanadda carruurtooda. Haddiise ay is qabin waa in warqad ku buuxiyaan maamulka bulshada (xafiiska arrimaha qoysaska) oo lagu cadeeya aabaha cunugga dhallay. Markaas kaddib ayay labadooda wadajir xaq ugu leeyihiin xilhaynta xannaanadda carruurtooda.
Qof waalidka booskiisa sharci ahaan u jooga canugga
Canugga, waaliddiin ama qof kale oo weyn la’aan yimaada Swiidhan, waxaa loo doorayaa qof waalidka booskiisa sharci ahaan u metesha. Qofka waalidka booskiisa sharci ahaan gala wuxuu mas’uul ka noqonayaa canugga xaaladihiisa shakhsiga ah, wuxuuna dhawrayaa canugga danihiisa wakiilka sharciga ah iyo waaliddiinta booskoodi.
Mamnuuc ahaanshada xoog adeegsiga ka dhanka ah carruurta
Swiidhan si waafaqsan sharci waa mamnuuc in xoog jir ahaaneed iyo maskax ahaaneed loo adeegsado carruur. Taasi xitaa wey khuseysa waaliddiinta carruur aysan dhalin korsada iyo dugsiga.
Xoog adeegsi jir ahaaneed waa nuuc kasta oo xoog adeegsi ah oo jirka loo geysto. Garaacid fudud, in timaha laga jiido iyo in la qanjaruufto sidoo kale waa xoog adeegsi.
Xoog adeegsi maskax ahaaneed wuxuu noqon karaa handadaad, cabsi gelin, in wax kama jiraan laga soo qaado ama in canugga meel lagu xiro. Xoog adeegsiga maskax ahaaneed wuxuu si la mid ah kan jir ahaaneed u dhaawaci karaa canugga isku kalsoonidiisa iyo horuumarkiisa.
Haddii aad ka welwelsantahay in canug uu dhibaato ku jiro waxaad la xiriiri kartaa Hey’adda adeegga bulshada. Haddii aad markhaati u ahayd xoog adeegsi ka dhan ah canug waxaad booliiska kala xiriiri kartaa taleefan nambarka 114 14.